2072 Earthquake rememberance day/World Malaria Day | विसं २०७२ सालको महाभुकम्पको सम्झना/विश्व औंलो दिवस | २०७८ वैशाख १२ | Hamro Patro
विसं २०७२ सालको महाभुकम्पको सम्झना/विश्व औंलो दिवस ( 2072 Earthquake rememberance day/World Malaria Day )
२०७२ सालको महाभूकम्पको सम्झना | विश्व औंलो दिवस
यी दिनहरू पनि कति चाँडो बितेका हुन् ?
छ वर्षअघि बैशाख १२ गते । मध्यान्ह १२ बजेपछि मुलुक सन्त्रासमा परेको थियो । त्यो अत्यास र कहाली लाग्दो क्षण सम्झदै डर लाग्छ ।अझै सम्झदा पनि निस्सासिन पुग्छौ । जुन दिन नेपालले महाभूकम्पको दैवी प्रकोप खेप्यो । विक्रम सम्वत् २०७२ सालको भुकम्पको छैठौं वर्ष पुगेको दिन हो, आज ।
त्यो महाभूकम्पको त्रास अझै बाँकी छ । अनि भूकम्पले लडाएको संरचनाहरू अझै पनि ठडिन बाँकी नै छन् । उक्त भूकम्पले अन्य थुप्रै पाठहरू सिकाएर गयो । जनधनको क्षति गर्यो । आज त्यतिखेरका दृश्यहरूलाई पुनरावलोकन गरिन्छ ।
विक्रम सम्वत् २०७२ को बैशाख १२ को भूकम्पको त्रास हाम्रो मन मष्तिष्कमा अझै कसै–कसै रूपमा बसेकै छ । घरबाहिर गाडी दौड्दा घर केही हल्लिएको अनुभव भएमा मात्रै पनि त्रासले हामीलाई अत्तालिन वाध्य पार्न छाडेको छैन ? आज ६ वर्ष पूरा भएसक्दा बल्ल धरहराको निर्माणले स्वरूप पाएको छ । भूकम्पको केन्द्रविन्दू गोरखा वारपाक वासिन्दाहरुले भर्खरै मात्र घर पाउँदैछन् ।
शहरका अलि कम, तर पहाडी बस्तीलाई पूरै उजाड बनाइदियो । भूकम्पले घरका संरचना ध्वस्त पारेपछि नागरिकहरु पाल, त्रिपाल र छाप्रामा बस्न वाध्य भए । पहाडी बस्तीमा तीन तले घर हुन्थे । भूकम्पसँगै एक तले घरमा झर्न वाध्य भएका छन् । ग्रामीण घरहरुका स्वरुप पनि परिवर्तन भएको छ, भूकम्पपछि ।
त्यो विपत्तिमा नेपालप्रति विश्व नै सहानुभूति देखाए । उनीहरुले राहत, उपचारकर्मीदेखि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएका थिए । हुन पनि त्यो भूकम्पको मार गरिब परिवारमाथि नै प¥यो ।
हजारौंको ज्यान लिने त्यो महाभूकम्प अनि त्यसपछिका अनगिन्ती पराकम्पमा प्रकृतिसँग मानव संरचनाहरूले घुँडा टेकेका थिए । अनि मानवको सम्बन्ध र घरका तल्ला होइन मनको सन्तोषले गरेको थियो । अझ ६ वर्षसम्म पनि पूरा नभएका पुनः उस्तै संरचना अनि निर्माणको बेथिति देख्दा भने हामीले कति सजिलै अनि छिट्टै महाभूकम्पलाई भुल्यौं भन्ने पनि भान हुन्छ । भूकम्पको नाश, बियोग अनि ज्ञान सबै कुरालाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्न जरुरी देखिन्छ ।
दरबार स्क्यावरहरू अझै पनि निर्माणकै क्रममा छन् । काष्ठमण्डप पनि बन्दैछ । २०७२ को भूकम्पले केवल संरचना मात्र बिगारेन कि हाम्रा पहिचान अनि ऐतिहासिक धरोहरलाई पनि उत्तिकै विनाश गरेको छ ।
काष्टमण्डप जसको नामबाट काठमाडौं शहर रहन गयो । त्यही संरचना नै एकपलमा धुलो–पीठो बनाएको भूकम्पले धरहरालाई पनि ढालेको थियो । काष्ठमण्डप अनि धरहराविनाको बुचो राजधानी आजसम्म पनि शहरवासीसँग आफ्ना पहिचान र मौलिकताको धरोहरको पुर्ननिर्माणको आशामा छन् ।
नेपाल भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले पनि उच्च जोखिममा रहेको देश हो । भूकम्पीय जोखिमको उच्चता भएपनि जोखिम न्यूनीकरणका लागि भने खासै पहल भएको पाइँदैन । भूकम्प कुनै जनाऊ दिएर आउँदैन । तसर्थ, अबका दिनमा भूकम्पीय विनाश र जनधनको नाश कम गर्न संरचना निर्माणमा कडाई अनि जनजागरणमा केन्द्रित हुन जरुरी देखिन्छ ।
अब यस वर्ष भने धरहरा लगायत ऐतिहासिक संरचनाले स्वरूप पाउन् । प्रकृतिसँग सामना गर्न नसकेतापनि आउने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सबैजना सचेत हुन सकौं । यसअघि १९९० सालको भूकम्पका कथाहरू अब २०७२ सालका कथाहरूले प्रतिस्थापित गरेको छ ।
स्मरणरहोस्, जमिनमुनीका प्लेटहरूको चलायमानका कारणले आउँदा पुस्ताले पनि भूकम्पको जोखिम सहन गर्नै पर्नेछ । भूकम्प टार्न नसके पनि यसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सबै जना लागि परौं । आजको दिनमा ती ज्ञात–अज्ञात मृतआत्माहरूलाई पनि श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाह्यौं, जसले भूकम्पमा ज्यान गुमाउनुभयो । बैशाख १२ विक्रम सम्वत् २०७२ को भूकम्पको सम्झना ।
लामखुट्टेको टोकाईबाट सर्ने एउटा अत्यन्त जोखिमयूक्त रोग 'औंलो' विरुद्धको दिवस संसारभर प्रत्येक २५ अप्रिलमा मनाईन्छ । औंलोलाई अंग्रेजीमा मलेरीया भनिन्छ, आउनुहोस गएका वर्ष अनि दशकमा लाखौंको ज्यान लिएको यस रोगका बारेमा केही जानकारीतर्फ । एनोफेलिस लामखुट्टेको टोकाईबाट औंलो को संक्रमण मान्छेमा सर्ने गर्दछ । सन् २०१५ को अध्यन अनुसार संसारभर अझै पनि ९१ बढी देशमा मलेरीयाको संक्रमण रहेको पुष्टी गरेको छ ।
मलेरियाको रोकथामकालागि समय समयमा दिइने खोप, समयमै अावश्यक अाैषधोपचार तथा घरभित्र वा बाहिर सुत्दा अनिवार्य झूलको प्रयोग महत्वपूर्ण छ । घर वरिपरि सरसफाई गर्ने, पानी जम्न नदिने, पानी जम्नसक्ने सरसामानहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने, जलाउन मिल्ने फोहोरहरूलाई व्यवस्थित ठाउँमा जलाइदिने र समय समयमा मलेरिया सार्ने लामखुट्टेहरुलाई भगाउने किटनाशक/रसायन छर्केर पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
सन् २००७ मा तात्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपती जर्ज डब्लु बुशको नेतृत्वमा हरेक वर्ष एप्रिल २५ लाई मलेरिया दिवसको रुपमा मनाउने क्रम शुरु भएको हो । आज संसारभरि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै मलेरिया दिवस मनाईन्छ, नेपालमा पनि विभिन्न स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने संघ-सस्था अनि कर्मचारीहरुले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत् तथा घरदैलो जस्ता विभिन्न जनचेतना कार्यक्रमको अायोजना गरेर सू-सूचित गर्नेगर्दछन् ।